Par Taratra sur 04/01/2017
Nidoboka eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy sy Antanimora ireo jiolahy nikononkonona fanafihana mitam-piadiana saron’ny poste Avancé sy ny borigadin’i Talatamaty, ny 28 desambra lasa teo. Voalaza fa ilay jiolahy nahatrarana grenady no naiditra eny Tsiafahy raha eny Antanimora kosa ny ambiny. Jiolahy iray hafa karohina.
Olona telo indray nilatsahan’ny varatra tany Ambohiboahangy Ambohimalaza Imerinkiasinina, afakomaly. Nalefa eny amin’ny hopitaly HJRA ireo naratra, saingy tsy mbola mahatsiaro tena kosa ny lehilahy iray isan’ireo niharam-boina. Voalaza fa nirefotra tampoka ny varatra tany amin’io tanàna io ka nilatsaka tao amin’ireo niharam-boina.
Naiditra am-ponja vonjimaika, ny 31 desambra 2016 teo ireo olona enina voarohirohy ho nitondra sokatra miisa enina tanaty fiara 4×4 Nissan iray. Tratran’ny zandary tao amin’ny fokontany Lavanono Beloha izy ireo nandeha fiara 4×4 ka hita tao anaty fiara ireo sokatra ireo nandritra ny fisavana.
Mbola karohina hatramin’ny omaly ny iray amin’ireo mpanarato navadiky ny lakana tao amin’ny farihin’Itasy Ampefy, afakomaly. Roa lahy izy ireo no voalaza fa nanarato teo amin’ny farihin’Itasy. Rehefa tonga teny afovoan-drano dia nanipy harato ny iray ka nivadika ny lakana. Nahafikitra mololo ilay lehilahy iray raha tsy hita popoka kosa ilay namany.
Maty notsindromin’ny sakaizany antsy ny tovovavy iray rehefa avy namonjy alim-pandihizana, tao amin’ny fokontany Ankianjabe Andapa, afakomaly. Niady izy roa rehefa tonga tao an-trano ka nilaza hisaraka ilay vehivavy. Tezitra noho izany ilay tovolahy sakaizany koa notsindrominy antsy teo amin’ny tratrany ilay tovovavy ka maty tsy tra-drano. Mbola mpianatra ao amin’ny Lycée Andapa ilay niharam-boina. Ny borigadin’ny zandary ao Andapa no manao ny famotorana.